China Semi-auto Ultrasonic Tube Sealer HX-007 ifektri kanye nabaphakeli | Umshini we-HX
Amandla 10-18pcs / iminithi
Ubukhulu Ukupakisha L960 * W710 * H840mm
* Ithebula phezulu, ukwakheka okusebenzayo nokuhlanganisiwe, okuvumeleke kakhulu ukusebenza nekhasimende elikhuthaza ukugcwaliswa kwabakhiqizi bokuqalisa, isivivinyo semakethe, noma isampula lokuhlola elabhorethri.
* Yondla ngokwakho ithubhu, cindezela inkinobho yokuqala, umshini ungazitholela ngokuzenzakalela uphawu lokubhalisa, ungene esiteshini sokubekwa uphawu, ubeke uphawu (ngokufaka amakhodi), uqede ukusika futhi uphume ukuze abasebenzi bakhiphe kalula.
* I-R & D ezimele ye-digital ultrasonic yokulandela ngomkhondo ibhokisi lokulawula ugesi, asikho isidingo sokulungisa imvamisa, ngamandla enxephezelo yokusebenza okuzenzakalelayo, ukugwema ukuncipha kwamandla ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Kungenzeka ulungise ngokukhululeka amandla asuselwa ezintweni ezenziwe ngoshubhu nosayizi, okuzinzile nobuncane besilinganiso sephutha, ukunweba ubude bempilo kunebhokisi elijwayelekile likagesi.
* I-PLC enesistimu yokulawula isikrini sokuthinta, enikezela ngomuzwa wokusebenza onobungane.
* Isenzo ngasinye sasingalawulwa ngokuzimela kusikrini sokuthinta, sinobungane ngokulungiswa phakathi kwamashubhu ahlukile. Abasebenzi bangasebenzisa ithubhu eyodwa ukusetha zonke izikhundla, bonge isikhathi esiningi nezinto ezibonakalayo.
* "Panasonic" inzwa ephezulu ebucayi enezimoto ezingaphezulu, ingalandelela kahle uphawu lokubhalisa.
* Isikhunta sokufaka amakhodi ukwakheka kwesikhala, lapho kungena esikhundleni sosuku lokufaka amakhodi, asikho isidingo sokulungisa ibhalansi.
* Ubakaki ophakanyisayo ophakanyiswayo osheshayo ngewashi lesandla, ungahle ulungise ngokuya ngobude obuhlukile beshubhu.
* Ukuphepha kwe-Acrylic Cover, ukuphepha okwengeziwe nezandla ezinhle, ezilwa nokubamba.
Isetshenziselwa kabanzi ukudla, okwelapha, izimonyo, amakhemikhali kanye nezinye ipulasitiki, i-PE, i-aluminium laminated tube uphawu.
1. Iziphathi ze-Tube zobubanzi obuhlukile
Langaphambilini Semi okuzenzakalelayo Ultrasonic Tube Sealer Ukuze Special Tube HX-003
Olandelayo: Okuzenzakalelayo Ibhodlela Ukugcwalisa Futhi Capping Machine HX-20AF
I-Ldpe Tube Sealer
Semi okuzenzakalelayo Tube Sealer
Umshini Wokushisa We-Tube
I-Ultrasonic Tube Sealer